I-Tree House phakathi kwehlathi @ Kailasa Woods - I-Airbnb
I-Tree House phakathi kwehlathi @ Kailasa Woods
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Mayur & Anisha
U-Mayur & Anisha Ungumbungazi ovelele
I-Kailasa Woods iyindlu encane yezingodo phakathi kwehlathi laseSal emagqumeni aseMussoorie. Indlu yesihlahla egcwele zonke izinsiza kodwa ekhethwe encwadini yezinganekwane, eyakhiwe ngemfudumalo nothando, ehlanganiswe namaphupho ukuze ikuvumele uphile futhi ujabulele inkathi yencwadi yasehlathini.
Ngombhede owumbhede nencwadi yezindaba, ukudla okwenziwe ekhaya nesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi, kuvulandi ovulekile nomoya opholile, ukutshiyoza kwezinyoni nemisindo yasehlathini ....sikumema ukuthi uze uzophila iphupho...iphupho sithembisa ukukwenzela iqiniso ...
Indlu yonke yesihlahla ingeyakho, ungeza uzokwabelana ngeDen yethu, lapho ungabuka khona amamuvi, udlale imidlalo yebhodi, udlale isiginci.
Ungasebenzisa indawo yethu yokudlela engahlelekile futhi udle isidlo sasekuseni, isidlo sasemini njll ube nombono wehlathi lomuntu siqu...
4.95 · 74 okushiwo abanye
Siseduze nendawo yokulondoloza iSal Forest.
Ibungazwe ngu-Mayur & Anisha
UMayur & Anisha Ungumbungazi ovelele